Sajhasabal.com | Homeविदेशबाट फर्केर गाउँमै उद्यम
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदले कोरोना महामारीमा घोषणा गरेको राहत प्याकेजहरु
थप ७ दिन लकडाउन गर्न सिफारिस
भारतीय आप्रवासीहरु कोरोनाको त्रासले सयौँ माइल हिँडेर घर पुग्दै
नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज आज २५० यात्रु लिएर अष्टे«लिया उड्दै
४ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ
लकडाउन आवज्ञा गर्ने ३५२ भारतीय वीरगञ्जमा पक्राउ
डिजेल-पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं उपत्यकाका यी २२ स्थानमा पाईन्छ एल.पी.ग्यास (सूचीसहित)
प्रचारबाजीका साथ विशेषज्ञ आए, सामान बुझाए, गए !
लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट
सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताको चैतको रकम सरकारले व्यहोर्ने
कोभिड–१९ बाट विश्वभर ३१ हजार ९२० को मृत्यु, संक्रमित संख्या ६ लाख ८० हजार बढी
कतारमा क्वारेण्टाइन र आइसोलेसनमा रहेका श्रमिकको तलव कटौती नहुने
रोमानियामा ५ सय नेपाली कामदारलाई बेतलबी बिदा, १ हजार श्रमिकले ७५ प्रतिशत पारिश्रमिक पाउने
कतारमा श्रमिकका लागि हटलाइन सुरु, ९२७२७ मा फोन वा एसएमएस गरेर गुनासो दर्ता गर्न सकिने
विदेशबाट फर्केकाले क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग गरिदिन वैदेशिक रोजगार वोर्डको आग्रह
श्रम स्वीकृति लिएर पनि विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगारीबाट राहत
विदेशबाट फर्केर गाउँमै उद्यम
Posted on: 21 Oct, 2019
कात्तिक ४, बागलुङ | भारतमा ३५ वर्षे जागीरे जीवन बिताउनुभएका जैमिनी नगरपालिका–१० राङखानी, दोभानका शशीधर शर्माको परिचय अहिले उद्यमीका रुपमा फेरिएको छ । शर्माको सेवा निवृत्त जीवन बेफुर्सदिलो छ । उमेरले ६१ टेकिसक्दा पनि सक्रियता उस्तै छ ।
तीन वर्षअघि गाउँ फर्कनुभएका शर्माको दैनिकी पशुपक्षीको स्याहारसुसार र खेतीपातीमा बित्छ । कुनै बेला उजाड बनेको घरगोठ, खेतबारी उहाँ आएपछि हराभरा भएको छ । परम्परागत कृषिले व्यावसायिक रुप पाएको छ ।
एक वर्षअघि ‘ऋमा पोल्ट्री फार्म’ खोलेर शर्माले व्यावसायिक कुखुरापालन शुरु गर्नुभएको हो । ‘फार्म’मा ‘लेयर्स’ जातका डेढ सय कुखुरा छन् । गाउँमा ताजा अण्डा उत्पादन गर्ने र बेच्ने उद्देश्यले कुखुरापालन शुरु गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
कुखुरापालनमा रु छ लाख बढी लगानी भएको छ । दुई आधुनिक खोर निर्माणमा मात्र रु पाँच लाख खर्च भएको शर्माले बताउनुभयो । “दैनिक एक सय ३० देखि ४० सम्म अण्डा उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा अण्डा १२ रुपैयाँ ७० पैसा र क्रेट तीन सय ८० मा बिक्री भइरहेको छ ।” अण्डाबाट मासिक रु. ५५ हजारसम्म कारोबार हुन्छ ।
खर्च कटाएर महीनामा २०/२५ हजारसम्म नाफा निस्कने गरेको छ । कुखुरापालन व्यवसायलाई थप विस्तार गर्ने उहाँको योजना छ । “सबैले चिसो ठाउँमा कुखुरापालन हुँदैन भन्थे, मलाई गर्छ भनेर पत्याएका थिएनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर गरेपछि सम्भव हुँदो रहेछ, अहिले सबैले राम्रो काम गर्यो भनेर प्रशंसा गर्छन् ।”
कुखुरालाई चाहिने तापक्रम व्यवस्थापनका लागि आधुनिक तरिकाबाट खोर निर्माण गरिएको शर्माको भनाइ छ । ‘फार्म’मा उत्पादित अण्डा गाउँमै खपत हुने गरेको छ । शर्माले कुखुरासँगै बाख्रापालनलाई पनि अघि बढाउनुभएको छ । अहिले उहाँकोमा माउ र पाठापाठी गरी सात बाख्रा छन् ।
बोका, खसी बिक्रीबाट पनि राम्रै आम्दानी हुने गरेको छ । गोठमा भैँसी र गोरु पनि छ । परिवारलाई चाहिने तरकारी बाहिर किन्नुपर्दैन, घरमै फल्छ । खेतबारीमा अन्नबालीको काम पनि शर्माले सम्हाल्दै आउनुभएको छ । उहाँ जागिरमा विदेश हुँदा घरमा कोही पनि बस्दैनथे । श्रीमती रत्नादेवी शर्मा जागीरे र व्यवसायी छोराबुहारीसँग बागलुङ सदरमुकाम बस्नुहुन्थ्यो । छोरीको भारतमै बिहे भइसकेको थियो ।
शर्मा नेपाल फर्केपछि श्रीमती रत्नादेवी पनि गाउँ फर्कनुभयो । दुवैजना मिलेर व्यावसायिक कृषि पेशातिर लागे । “जागीरबाट निस्केपछि छोराबुहारीले शहरतिरै बस्ने योजना बनाएका थिए”, शर्माले भन्नुभयो, “तर, मलाई गाउँ नै फर्कन मन लाग्यो, कृषितिरै मन गयो ।” शर्माकी आमा पनि अहिले छोराबुहारीसँगै गाउँमै रमाएर बस्नुभएको छ । आफ्नै गाउँघरमा बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण शर्मा बन्नुभएको छ ।
२२ वर्षको उमेरमा कामको खोजीमा भारत पुग्नुभएका उहाँले २५ वर्ष हैदरबादको टायर कम्पनीमा र १० वर्ष बाहिर काम गर्नुभएको थियो । बुबा घर फर्केर कृषिमा लागेपछि पेशाले स्वास्थ्यकर्मी छोरा ऋषिरामले पनि ‘फार्म’ व्यवस्थापनमा सघाउँदै आउनुभएको छ । रासस
आज तरकारीको मूल्य केलाई कति ? बढी लिए के गर्ने ?
रातो हुनुपर्नेमा कफी कालो भोः किसान चिन्तित